Aluminium Sheet Fekitori, Vatengesi - China Aluminium Sheet Vagadziri
7075 ALUMINUM SHEETI
7075 aruminiyamu ndiro ndeyaAl-Zn-Mg-Cu super yakaoma aluminium, inova yakasimba simba, yakakwira kuomarara kutonhora kushanda yekugadzira alloy, iri nani kupfuura simbi nyoro.
6061 aruminiyamu jira ndeye yepamusoro mhando chiwanikwa chigadzirwa chinogadzirwa nekupisa kurapwa uye pre-kudhirowa kweMg uye Si, ine yakanakisa machinability, weldability uye yakanamirwa pamifananidzo zvivakwa, yakanaka ngura kuramba uye yakakwirira kuomarara.
6063 chiwanikwa aruminiyamu ndiro iri Al-Mg-Si mukuru plasticity chiwanikwa, pamwe rakaisvonaka kubudiswa ehupfumi, chakanakisa nomoto, extrusion uye yakanamirwa pamifananidzo, zvakanaka ngura nemishonga, kuomarara, nyore Polish, unhani, anodic oxidation maturo iri rakaisvonaka, ndiwo chaiwo extrusion chiwanikwa.
6082 aruminiyamu ndiro ndiro yakanaka zvishoma chiwanikwa aruminiyamu ndiro pakati 6 dzakatevedzana aruminiyamu mahwendefa (Al-Mg-Si), pamwe formability zvakanaka uye nyore kugadzira, zvakanaka anodic kuita waivako, nyore unhani, zvakanaka ngura kuramba uye oxidation nemishonga.
5A05 ALUMINUM SHEETI
5A05 aruminiyamu jira irustproof aluminium alloy yealuminium-magnesium nhepfenyuro, hunhu hukuru hwayo hwakadzikira huwandu, yakasimba simba uye yakasimba kukwirisa. Kwenzvimbo imwechete, huremu hwealuminium-magnesium alloy yakaderera pane mamwe akateedzana.
Anodized Aluminium Sheet Metal Vanopa, aruminiyamu yakarongedzwa pepa mutengo, Yakachipa Aluminium Sheets, aluminium alloy 6061 mutengo, Tsika Plate Aluminium Sheets, 7050 aluminium pepa,